Mogadishu Journal » Milkiilaha Liverpool Henry ayaa raaligelin bixiyay ka dib bixitaankii European Super League
Milkiilaha Liverpool Henry ayaa raaligelin bixiyay ka dib bixitaankii European Super League
John W Henry ayaa raaligelin ka bixiyay carqaladeyntii ay sababtay ku lug lahaanshihii Liverpool ee mashruuca European Super League, isagoo qirtay qalad la sameeyay markii la isku dayay inuu ku dhaqmo danaha kooxda laga dareemay.
Tartanka 12-ka koox ee gooni u goosadka ah ayaa kaliya la shaaciyay Axadii, laakiin falcelinta guud ee adduunka ayaa si dhaqso leh u keentay 'lixda' weyn ee Premier League oo dhammaantood ka laabtay soo jeedinta.
Manchester City ayaa aheyd kooxdii ugu horeysay ee shaaca ka qaadda go'aankooda ka bixitaanka, iyadoo Arsenal, Liverpool, Tottenham iyo Manchester United ay sii daayeen hadalo isku mar ah oo ay ku joojinayaan xiriirkooda.
Chelsea ayaa aheyd kooxdii ugu horeysay ee Ingariis ah ee lagu soo warramey inay sameynayso Super League-ga isla markaana Blues ayaa xaqiijisay intaas ka dib barbarihii 0-0 ee ay la galeen Brighton iyo Hove Albion Talaadadii.
“Waxaan rabaa inaan ka raali galiyo dhamaan taageerayaasha iyo taageerayaasha kooxda kubada cagta Liverpool qalalaasihii aan galiyay 48-dii saac ee la soo dhaafay,” ayuu yiri milkiilaha kooxda Liverpool Henry oo fiidiyoow ay kooxdu soo dhigtay baraha bulshada.
"Waxba ma dhahayaan laakiin waa in la sheegaa in mashruuca la soo saaray uusan waligiis istaagi doonin taageerada taageerayaasha. Qofna weligiis kuma fikirin si ka duwan Ingriiska. 48-kan saacadood waxaad si weyn u cadeysay inuusan istaagi doonin. waan ku maqlay. waan ku maqlay.
“Waxaan rabaa inaan ka raali galiyo Jurgen [maamulaha Reds Klopp], Billy (madaxa fulinta Hogan), ciyaartoyda iyo qofkasta oo aad ugu shaqeeya LFC si ay taageerayaasheena ugu faanaan. Gabi ahaan wax masuuliyad ah kuma lahan qaskan. Waxay ahaayeen kuwa ugu qaska iyo cadaalad darada sidaa ah. Tani waa waxa ugu xanuun badan. Waxay jecel yihiin kooxdaada waxayna u shaqeeyaan inay kaa dhigaan inaad ku faanaan maalin kasta.
"Waan ogahay in kooxda LFC oo dhami ay leeyihiin khibrad, hogaamin iyo xamaasad lagama maarmaan u ah dib u dhiska kalsoonida oo naga caawisa inaan horay u socono. In ka badan toban sano ka hor markii aan isqornay caqabadaha la xiriira kubada cagta, waxaan ku riyoonay wixii aad ku riyootay. Anaguna Aad baan u shaqeeyey si aan u hagaajiyo kooxdaada.
"Shaqadeenu ma dhamaan. Waxaana rajeynayaa inaad fahmi doontid xitaa markaan khaladaad sameyno, waxaan isku dayeynaa inaan ka shaqeyno danta kooxdaada. Howshaan waan kaa quustey."
Isniintii, ka hor intii aysan kooxdiisu la ciyaarin Leeds United tallaabada Premier League, Klopp wuxuu caddeeyay inuu neceb yahay Super League-ga la qorsheeyay, tartan ay ka muuqan lahaayeen 15-ka xubnood ee aasaasayaashu inay qaarkood ku lug leeyihiin xilli ciyaareed kasta iyadoon loo eegin natiijooyinka gudaha.
James Milner ayaa ka hadlay qorshahan markii la wareystay ka dib barbarihii 1-1 ee Reds ee Elland Road, halka ciyaartoyda Liverpool ay si wadajir ah u soo saareen bayaan maalintii xigtay, iyagoo cadeeyay mowqifkooda ku aadan arinta.
"Ma jeclin mana dooneyno inay dhacdo," ayaa lagu yiri fariinta, iyadoo la xaqiijinayo inay sii wadayaan ballanqaadkooda kooxda iyo taageerayaasheeda.
Madaafiic lagu garaacay Xarunta Villa Soomaaliya iyo Khasaaro ka dhashay (Sawirro)